The-adịghị akwụ ụgwọ ọbara onyinye ọrụ Taibao Group - China Shandong Zhongbaokang Medical
The-adịghị akwụ ụgwọ ọbara onyinye ọrụ Taibao Group
Virus Emegaghị Transfusion Myọcha
On June 12,2017, Taibao Group compined Zibo Blood Center ulo oru a mkpọsa onyinye ọbara, a ngụkọta nke 220 ọrụ abuana ke onyinye ifịk ifịk. Na 8:30 am, The akpa n'ala nke Taibao Group mkpara restaurant ghọọ a nwa oge ọbara onyinye ụlọ, ohere e kewara alo ebe, nchọpụta ebe, ọbara ebe ndị ọzọ ebe. More karịa iri na abụọ ọbara nọọsụ ebu ọkachamara ule na ọbara collection ngwá ọrụ na-amalite na-arụ ọrụ. Na ọrụ, Taibao Group onyeisi oche Gong Duanzhou na-edu ndú na-adịghị akwụ ụgwọ ọbara onyinye si ọbara onyinye ọrụ e haziri Taibao Group ugboro ise. Nke a oge, ihe karịrị 500 ndị ọrụ ndidi ifịk ngwa omume, na n'ikpeazụ anyị na-ewerekwa ụfọdụ nke ndị ọrụ na-ekwekọghị ọnọdụ isonye na a na-akwụghị ụgwọ ọbara onyinye. Ikere na-adịghị akwụ ụgwọ ọbara onyinye bụghị naanị enhances ịhụnanya na ibu ọrụ nke na-arụ ọrụ, na-akpali ndị ọzọ ka ndị mmadụ mara na isonye na-adịghị akwụ ụgwọ ọbara onyinye, ma na-enyere ọtụtụ ndị chọrọ enyemaka. Anyị dị njikere iji hazie otú ahụ bara uru na-eme ka a mmadụ ọrụ enterprise. Na otu ụbọchị, Taibao Group, a ngụkọta nke 220 na-elekọta ọrụ aka na afọ ofufo ọbara onyinye eme, na cumulative ọbara olu ruru ihe fọrọ nke nta 60000 ml. Ná ngwụsị nke ọbara onyinye, ndị ọrụ na-natara na ihe ncheta nye site na obodo ọbara center na oriri mmanụ, àkwá na ndị ọzọ ekwukwa n'akwụkwọ Mmeju nyere site Taibao Group.
Post oge: Aug-02-2018